Ny manan-danja, dia ny maha ianao anao | Fondation des Choisis de Jésus
Ny manan-danja, dia ny maha ianao anao
1C_23: Anaka, fantatro avokoa izay ilainao. Izaho, dia mijery eo amin’ny tenanao izay hamboariko sy havaoziko, rehefa nahazo fahazoan-dàlana avy aminao. Iriko ny tenanao ho tsara endrika be, hadio be sy ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ny manan-danja, dia ny maha ianao anao, ireo izay hamelanao Ahy hotanterahiko ao aminao amin’ny alalanao sy manodidina anao. Matokisa Ahy, satria tiako ianao.